Mr Play Casino SA% currentyear% - Kufika ku-R4,000 +100 Spins yamhhala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-mr.play casino
Isibuyekezo se-Mr.Play Casino
Isofthiwe:Microgaming, NetEnt, Aristocrat, Fugaso, Big Time Gaming
Usizo: 24/7 customer support through email
Ibhonasi Lokukwamukela:R3,200 ne 100 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
5 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Iphethwe futhi iqhutshwa yi-Aspire Global, uyazi ukuthi usezandleni eziphephile ne Mr Play Casino.
I-Aspire Global yiqembu futhi elineBarbados Casino, iCasiplay neKing Casino ezincwadini zalo, konke okuyizindawo zamakhasino ezisezingeni eliphakeme ezithandwa ngabadlali. Izindaba ezimnandi ukuthi uMnu Play Play Casino uyalandela kulolo hlu.
Abadlali baseNingizimu Afrika bangakujabulela ngokusemthethweni i-Mr.Play Casino ngokuzethemba okuphelele, futhi kunezinhlobo eziningi zezindlela zokukhokha ezamukelwe ukukuphakamisa futhi usebenze ngokushesha!
Ibhonasi Yesamukelo e-Mr Play Casino
Sekukonke, abadlali abasha bangafika ku-R4,000 & 100 ama-spins amahhala lapho bebhalisela i-Mr Play Casino. Ibhonasi yokwamukela ihlukaniswe phakathi kokufakwa kwemali kokuqala komdlali ngokulandelayo:
Idiphozi yokuqala – 100% kuze kufike ku-R1,000
Idiphozi yesibili – 50% kuze kufike ku-R1,500
Idiphozi yesithathu – 50% kuze kufike ku-R1,500
Uzothola awu-20 spins amahhala ku-Starburst ngokushesha nje lapho ubhalisa, bese uthola amanye ama-80 ezinsukwini ezine ezizayo ongazisebenzisa kuFinn naseSwirly Spin, Book of Dead, VIP Black nase-Aloha! ICluster Iyakhokha
Amakhodi Ebhonasi Engena Diphozithi e-Mr Play Casino
Kunebhonasi encane engekho ediphozithi etholakalayo yabadlali baseNingizimu Afrika e-MrPlay Play Casino, futhi konke okumele ukwenze ukuze uthole izandla zakho kukho ukubhalisa imininingwane yakho – ngeke udinge ukuhlukana neRandi elilodwa. Kodwa-ke, uzothola ama-spins amahlanu amahhala, futhi bangahle bathathe onqobayo omncane ukuze aqale!
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa i-Mr Play Casino
Monday Rewards Mane ufake idiphozi ngoMsombuluko futhi uzothola ibhonasi yokulayisha kabusha engu-50% - indlela enhle yokuqala isonto elisha!
Loyalty Rewards Uqala ukuthola amaphuzu okuthembeka kusukela lapho ujoyina i-Mr.Play Casino, futhi lapho udlala kakhulu, amaphuzu athe xaxa owatholayo! Lokhu kungashintshaniswa kamuva ngama-spins wamahhala, amabhonasi, ukukhuphula imali nokunye okuningi.
Mr.Play’s Double Points Njalo ngezikhathi ezithile, e-Mr Play Casino uzomemezela umdlalo okhethekile ongaphansi kwamaphoyinti wokuthembeka aphindwe kabili ngesikhathi esithile - qiniseka ukuthi awuphuthelwa!
Pariplay’s Fallen Leaves Promo Mr Play casino futhi uphethe okunikezwayo kusuka kubathuthukisi bayo be-software, futhi uzobona lokhu kubhalwe ekhasini 'lama Promoshini'. Ngesikhathi sokubhala, kunebhonasi epholile evela kuPariplay kuya phezulu - abadlali bangathola amaphuzu ngokudlala izihloko zabo, bakhuphuke ibhodi yabaphambili, futhi bazame ukuwina isabelo sabo semali engu-R100,000 yomklomelo!
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi e-Mr Play Casino
Njengawo wonke amakhasino amahle, e-Mr Play Casino ukwenze kwaba lula ngangokunokwenzeka ukubhalisela i-akhawunti yomdlali entsha.
Mane uchofoze inkinobho ethi ‘Vula i-Akhawunti’ phezulu ekhasini eliyisiqalo, futhi lokhu kuzovula inqubo enezinyathelo ezimbili ukuze uqedele ukubhalisa kwakho – icela i-imeyili nekheli lakho lasekhaya, usuku lokuzalwa, igama lomsebenzisi nephasiwedi. Uma lezi zicutshunguliwe, uzobe ulungile ukuhamba.
Faka idiphozi noma nini lapho usukulungele ukusebenzisa lelo bhonasi elokwamukela elivelile.
Vele, uma usuyilungu le- Mr. Play Casino, ungangena ngemvume ngokuchofoza inkinobho efanele phezulu esikrinini.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ungayidlala ku- Mr.Play Casino
Ngabathuthukisi be-software abangaphezu kwe-40 abasebenza kusayithi, uyazi nje ukuthi i-Mr Play Casino uzosebenzela iqoqo elimangalisayo lemidlalo.
Lokhu kunjalo impela, ngezikhala ezihola phambili embonini kanye nemidlalo yetafula ngobuningi konke okuncintisana nokunakwa kwabadlali.
Uma uskrola kulabhulali yezikhala e-Mr Play Casino, uzobona ukuthi ihlukaniswe ngezigaba ezimbili ezihlukile: ama-classic kanye nama-video slots.
Isigaba sakudala, njengoba igama liphakamisa, kuyikhaya lezindawo ezimile isikhathi eside – okunjenge -Dark King, Rage of the Seas, Disco Danny kanye ne-Curse of the Werewolf kusathokozelwa iminyaka ngemuva kokukhishwa kwabo.
Isigaba sama-slots evidiyo sidlala imidlalo equkethe imidwebo emnandi nezici zamabhonasi ezihlukile – cabanga ngezihloko ezinjengeFruity Friends, iGonzo’s Quest, uJack neBeanstalk, iJungle Jim El Dorado, njalonjalo.
Ungadlala ukuzijabulisa noma ukuzama ukuwina imiklomelo emikhulu ye-jackpot – ukukhetha kungokwakho!
Ngenkathi ukukhethwa komdlalo wetafula e-Mr Play Casino kusehlangothini oluncane, zonke izihloko ezibalulekile zimboziwe.
Uzothola i-blackjack yakudala kanye ne-VIP nezinguqulo zemidlalo eminingi, kuyilapho i-roulette ihlinzekelwa kahle ngokuhlukahluka okujwayelekile, okwaseEurope, kwaseMelika kanye ne-turbo kwesenzo sokujikeleza kwamasondo
Njengoba kushiwo, umtapo wolwazi wemidlalo yetafula usohlangothini oluncane, futhi alikho iqoqo elikhulu ‘labanye’ ongabhala ngalo. Kodwa-ke, ungazama inhlanhla yakho etafuleni le-baccarat, bese uthatha umthengisi eJacks noma Better. Uma ufuna ‘ukudlala okusheshayo’, ungazama isandla sakho ngenketho yamakhadi okuqala.
Mr Play Casino Omakhalekhukhwini: Ngabe Mr. Play Casino Iqhathanisa Kanjani Kuselula?
Ngabe usale ukhungathekile lapho isayithi leselula lekhasino lakho eliyintandokazi lingukuvuselelwa kabusha kwewebhusayithi eyinhloko, futhi libukeka kabi noma lingasebenzi kahle?
Yebo, azikho izinkinga ezinjalo ngesayithi lesiphequluli seselula esivela e-Mr Play Casino. Abaqambi bathathe isikhathi nomzamo wokuhlenga le webhusayithi ukuze ingene kahle kumadivayisi esikrini esincane.
Amakhasi esayithi wonke alayisha ngokushesha futhi kanjalo nemidlalo, ngakho-ke uzothola isipiliyoni sibe yinjabulo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Ngingadawunoloda i-Mr.Play Casino kufoni yami?
Ngesikhathi sokubhala lesi sibuyekezo se- Mr.Play Casino, alukho uhlelo lokusebenza lweselula olutholakalayo, futhi akukho nocezu lwesoftware ongalulanda ukuze udlale imidlalo yalo kudivayisi yakho. Kodwa-ke, okudingayo ukuxhumana nge-inthanethi okufanelekile ukujabulela okuhle kakhulu okunikezwa e-Mr Play Casino, ngakho ungesabi!
Izindlela Zokukhipha Imali Ezamukelwe e-Mr Play Casino
Visa/Mastercard Yebo Izinsuku 3-5
Skrill Yebo 0-24hrs
Neteller Yebo 0-24hrs
Trustly Yebo 0-24hrs
EcoPayz Yebo Yebo
PayPal Yebo Yebo
Bank Transfer Yebo Izinsuku ezingu-5-7
Izindlela Zokudiphozitha Ezivunyelwe e-Mr Play casino
Mr Play Casino Inhlangano Yekhasino kanye Nemininingwane Yokuxhumana
Ulwazi oluvamile e-Mr Play Casino
Customer Support e-Mr Play Casino
Kusungulwe: 2017 Inombolo yamahhala ye-SA: N/A
Kusetshenziswa ngu: Aspire Global I-imeyili: [email protected]
Izinzuzo nezingozi ze- Mr. Play Casino
- 40+ wabathuthukisi besoftware abahamba phambili - Akukho ukwesekwa kwefoni yaseNingizimu Afrika
- Ibhonasi yokwamukela enezitezi ezintathu - Ukukhethwa komdlalo wetafula elincane
- Ama phromoshini amaningi ongawajabuela
- Izindlela eziningi zokukhokha zamukelwa
Yini Eyenza i-Mr Play Casino Kube Yinketho Ethandwayo Yabadlali BaseNingizimu Afrika?
Ukukhethwa okungafani kwezindawo ezitholakalayo
Ukhetho Oluhle lwama Phromoshini nama bhonasi
Izindlela eziningi zoku khokha
Izikhalazo ZaseNingizimu Afrika ze-Mr Play Casino
Alukho usizo lwefoni lwaseNingizimu Afrika olutholakalayo
Izisekelo kuphela ngokuqondene nemidlalo yetafula ethintekayo
Ngabe i-Mr.Play Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Yebo, kusemthethweni ukujoyina i-Mr.Play Casino futhi usampule umtapo wolwazi wemidlalo yayo emihle, futhi ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo ulawulwa ngokuphelele futhi ubhekwe ezinye zeziphathimandla ezihamba phambili zokugembula emhlabeni.
Ngiyikhipha kanjani imali ku- Mr Play Casino?
Lapho ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Mr.Play Casino, uzobona ukuthi unezinhlobo zezinketho ezitholakalayo uma uchofoza inkinobho yemenyu. Okunye kwalokhu ukuvakashela isigaba se-cashier, lapho ungafaka khona imali bese ucela ukuhoxiswa. Mane ukhethe ukuthi ufuna ukukhipha malini, khetha indlela yakho yokukhokha, bese imali izothunyelwa kuwe.
Yini i-Mr Play Casino?
Mr Play Casino iyisayithi yekhasino eletha ndawonye ukukhetha okukhulu kwezindawo zokudlala nemidlalo yasetafuleni yasikhathi sonke endaweni eyodwa, konke okutholwe kumafemu wesoftware aholayo embonini.
Ubani Umnikazi we-Mr Play Casino
Mr Play Casino ungumnikazi futhi uqhutshwa yi-Aspire Global, ehlala namuhla njengelinye lamaqembu okugembula ahamba phambili emhlabeni. Inamanye amagama abonakala kakhulu emhlabeni kub
Ingabe i-Mr.Play Casino inezici zokubheja ezemidlalo?
Yebo, i-Mr Play Casino inomsebenzi wezemidlalo, futhi lapha ungabheja ezinhlobonhlobo zezenzo zezemidlalo ezivela emhlabeni wonke.
Ngabe i-Mr Play Casino inikela ngohlelo lwe-VIP?
Isikimu se-VIP e-Mr Play Casino singena ohlelweni lokwethembeka, ngakho-ke lapho udlala kakhulu, imivuzo yakho iba mikhulu. Sebenza uze ufike ePrestige futhi uzohlomula ngokukhokha ngokushesha, ukwesekwa kwamakhasimende okuthuthukisiwe, amabhonasi akhethekile nokunye okuningi.
Yiziphi izidingo zokubheja e-Mr Play Casino?
Izidingo zokubheja e-Mr Play Casino zingu-35x.